गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भ – Chitwan Post
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेष्ठ १५, २०७७
नेपालमा नयाँ युगको सुरूवात भएको दिनको रुपमा आज जेठ १५ अर्थात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दिवस मनाइँदैछ । आज नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा युगान्तकारी र ऐतिहासिक दिन मानिएको छ । आज नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट २४० वर्षे जहानियाँ शासनको अन्त्य गर्दै जनताको जित भएको दिन पनि हो । आज हामीले १४औँँ गणतन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा विसं २००७ सालदेखिका संघर्षहरुको पुनः स्मरण गर्नैपर्ने हुन्छ । विसं २००७ सालको जनक्रान्तिदेखि २०३६ साल, २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलन, दसवर्षे माओवादी सशस्त्र विद्रोह हुँदै ०६२/६३ सालको दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलता र विभिन्न बलिदानीपूर्ण संघर्षहरुको संयुक्त उपलब्धिका रुपमा मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो । दोस्रो जनआन्दोलनको जनउभारले निरंकुश शाही शासनलाई घुँडा टेकाउनेमात्र गराएन, राजसंस्थाकै विधिवत् अन्त्य गर्दै ०६५ जेठ १९ मा पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको घोषणा ग¥यो । मुलुकमा जनताको शासन स्थापित भई राजाको स्थानमा जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बने । तर दुर्भाग्य ! मुलुकमा गणतन्त्र आए पनि व्यवहारमा भने शासकीय मनोवृत्ति अझै गणतान्त्रिक बन्न सकिरहेको छैन ।
सरकारले तामझामका साथ यो दिवस मनाउँदै आएको छ । गणतन्त्र नेपालमा अहिले तेस्रो राष्ट्रपतिको कार्यकाल जारी छ । ऐतिहासिक संविधान निर्माण भई स्थानीय, संघीय तथा प्रदेश निर्वाचनपश्चात् संघीयता र गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि तीन तहको सरकारले शासन गरिरहेको छ । सरकारले चौधौँ गणतन्त्र दिवस मनाउने तयारी गर्दै गर्दा आमजनताको मनमा भने विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइरसको त्रास र सन्नाटा छाएको छ । जनताको मनमा असीमित जिज्ञासा पनि उठेका छन् । उनीहरुले सोध्ने गरेका छन्– बेलाबेला गणतन्त्रले हाम्रो जीवनमा के परिवर्तन ल्यायो ? जहानियाँ शाही शासनकालमा भन्दा कुन र के मानेमा गणतन्त्रमा फरक रह्यो ? समाजमा शान्ति, विकास, अमनचयन र सुरक्षाको स्थितिमा केकस्तो भिन्नता आयो ? जनताले गणतन्त्र आत्मसात् गर्न सकेका छन् कि छैनन् ? गणतन्त्रका उपलब्धिहरु चुम्न सके कि सकिरहेका छैनन् ? कोरोना कहरका बीच मनाइन लागेको गणतन्त्र दिवसका अवसरमा यी यावत् सवालहरुमाथि विमर्श हुन जरूरी छ । गणतन्त्रलाई एउटा औपचारिक विषयका रुपमा मात्रै लिइनुहुँदैन । सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले गणतन्त्रका उपलब्धिहरुको चर्चा गरेरमात्रै पनि पुग्दैन, करिब डेढ दशकको गम्भीर समीक्षा पनि गर्नुपर्ने भएको छ ।
इतिहासकै अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल भई गणतन्त्र स्थापना भए पनि यो पूर्णरुपमा फस्टाउन नसकेको सत्य हो । राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो साख जोगाउन असफलमात्र भएका छैनन्, उपलब्धि गुम्ने हो कि भन्ने त्रास बेलाबेलामा सार्वजनिक मञ्चबाटै प्रकट गर्दै आएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको चुनौती यथावतै छ । यतिका समयसम्म पनि तीन–तीन प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न फलामको चिउरा चपाएसरह भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र अधिकार बाँडफाँटका विषयमा अझै असन्तुष्टि बाँकी छन् । संविधान जारी हुनासाथ केही समूह र समुदायका असन्तुष्टि कायमै छन् भने सीमा विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुनसकेमात्रै गणतन्त्रको सार्थकता हुनुका साथै संघीयताले सफलता पाउन सक्छ । तर, विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ कि पटकपटकका उपलब्धिहरु गुमाएर नमीठो अनुभव सँगाले पनि राजनीतिक दलका नेता र सरकारका क्रियाकलाप गणतान्त्रिक बन्न सकिरहेका छैनन् । सरकार जनहितको स्वार्थभन्दा स्वेच्छाचारी ढङ्गले अगाडि बढेको आभाष हुन्छ । राष्ट्रपति संस्था बेलाबेलामा विवादित गर्ने काम पनि सरकारबाटै हुने गरेको छ । मुलुक शान्ति प्रक्रियाको बाटोमा लम्किरहे पनि द्वन्द्वका अवशेषहरु र सत्यनिरुपण गर्नुपर्ने मुद्दा बाँकी नै छन् । सरकारको अहंकार र हठले प्राप्त उपलब्धि गुम्ने हो कि भन्ने संशय बाँकी नै छन् । सरकारले असन्तुष्ट पक्षहरुलाई विश्वासमा लिँदै गणतन्त्रलाई साँच्चै नयाँ युगमा रुपान्तरण गर्न सकोस् । गणतन्त्र हासिल गर्न बलिदानी दिने ज्ञात–अज्ञात सहिदहरुलाई स्मरण गर्दै जीवित योद्धाहरुको योगदानको कदर होस् !